Vidiyo ọhụrụ Pixel 3 XL ọhụrụ na -ekpughe atụmatụ ọhụrụ | Androidsis
Agbanyeghị na ọnwa ole na ole ga - aga tupu eme ya ọrụ, Leaks Google Pixel 3 XL anaghị akwụsị. A blog-lekwasịrị anya Russian blogger n'ụzọ ụfọdụ jisiri ike iji nweta draịva ma dekọọ a aka-na nke ahụ na-ekpughe ọtụtụ data ọhụrụ.
Na mbụ, otu blogger ahụ gosipụtara vidiyo yiri ya na Pixel 3 XL na igbe ya na ngwa ya niile, mana na-enweghị ikpughe ozi, oge a ekele maka vidiyo anyị nwere ike ikwenye ọtụtụ njirimara asịrị.
Vidio ahụ, nke izizi dị naanị dị ka nbudata Telegram, lebara anya ngwa ngwa ma ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ya ozugbo na YouTube.
Ekele maka aka a na-atụghị anya ya ugbu a anyị maara na Pixel 3 XL ga-enwe nnukwu Ngosipụta nke 6.7-inch na mkpebi 1440 x 2960 na notch, ihe ọ adịlarị asịrị n'izu gara aga.
Ekwentị ga-enwe a 3,430 mAh batrị nke na akpa ilekiri anya ọjọọ n'ihi nnukwu ihuenyo nke ga-eri ezigbo batrị, n'ezie anyị ji n'aka na Google emeela ka arụmọrụ rụọ ọrụ kachasị iji nweta ọrụ kachasị mma.
Akwụkwọ ọkọlọtọ nke ga - esote Google ga - ebu a Igwefoto 12 MP n'azụ na kamera n'ihu nke 8 MP maka selfies. Ihe mejupụtara a yiri nke Pixel 2 XL, mana n'ezie ihe mmetụta adịla mma ma agbakwunyela atụmatụ ndị ọzọ.
El processor ga - abụ Snapdragon 845 nke ga - esonyere 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n’ime. Ọrụ nke Ngosipụta oge niile ekwentị a nwere nkwado maka akwụkwọ ahụaja, ọrụ nwere ike ịbụ naanị Pixel 3 na Pixel 3 XL.
Enwebeghị data gbasara ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ yana nnweta ya, mana n'ịhụ ọnụego ọnya ahụ anyị nwere ike ịmata n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Leaked Google Pixel 3 XL Video na-ekpughe atụmatụ ọhụrụ